Ná Rebeka Pɛ sɛ Ɔma Yehowa Ani Gye | Momfa Nkyerɛkyerɛ Mo Mma
KENKAN WƆ Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chokwe Chol Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Lovari Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pennsylvania German Piaroa Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Rebeka yɛ ɔbea a na ɔdɔ Yehowa. Ná ne kunu din de Isak. Ná Isak nso dɔ Yehowa. Ɛyɛɛ dɛn na Rebeka huu Isak? Dɛn na Rebeka yɛe a ɛma yehu sɛ na ɔpɛ sɛ ɔma Yehowa ani gye? Ma yensua ne ho nsɛm pii.
Abraham ne Sara na wɔwoo Isak. Ná wɔte Kanaan asase so. Ná Kanaanfo no nsom Yehowa. Nanso, na Abraham pɛ sɛ ne ba no ware ɔbea a ɔsom Yehowa. Enti Abraham somaa n’akoa sɛ ɔnkɔ Haran nkɔhwehwɛ ɔyere mma Isak. Ɛbɛyɛ sɛ Elieser na ɔsomaa no. Haran na na Abraham abusuafo binom te.
Ná Rebeka ani gye ho sɛ ɔbɛyere ne ho asaw nsu ama yoma no
Elieser ne Abraham nkoa foforo na ɛkɔe. Ná ɔkwan no ware paa. Wɔde yoma du a wɔsõsõ nnuan ne akyɛde ahorow kɔe. Ná ɛbɛyɛ dɛn na Elieser ahu ɔbea a ɔfata sɛ Isak ware no? Bere a Elieser ne nkoa foforo a wɔka ne ho no duu Haran no, wokogyinaa abura bi ho, efisɛ na Elieser nim sɛ ɛrenkyɛ nkurɔfo bɛba hɔ abɛsaw nsu. Ɔbɔɔ Yehowa mpae, na ɔkae sɛ: ‘Sɛ mesrɛ ababaa bi nsu na ɔma me ne me yoma no nsu no bi nom a, mehu sɛ ɔno ne ɔbea a woapaw no ama me.’
Ankyɛ na ababaa bi a wɔfrɛ no Rebeka baa abura no ho. Bible ka sɛ na ne ho yɛ fɛ paa. Elieser srɛɛ no nsu, na ɔkae sɛ: ‘Oo, mɛma wo bi. Mɛma wo nsu no bi, na mɛkɔ akɔsaw bi ama wo yoma no nyinaa nso.’ Wo de, twa ho mfonini hwɛ! Yoma a sukɔm de wɔn nom nsu paa. Enti Rebeka tuu mmirika kɔɔ abura no ho mpɛn pii kɔsaw nsu brɛɛ wɔn. Sɛ wohwɛ mfonini no a, so wuhu sɛnea Rebeka ayere ne ho rema yoma no nsu no?— Ɛyɛɛ Elieser nwonwa sɛ Yehowa atie ne mpaebɔ saa.
Elieser de akyɛde pii a ɛyɛ fɛ maa Rebeka. Ɔno nso de Elieser ne nkoa foforo a wɔka ne ho no kɔɔ fie. Elieser kaa nea enti a Abraham somaa no ne sɛnea Yehowa atie ne mpaebɔ no kyerɛɛ Rebeka abusuafo. Rebeka abusuafo no ani gyee ho sɛ wɔde no bɛma Isak aware.
Rebeka ne Elieser kɔɔ Kanaan, na ɔwaree Isak
Sɛ wohwɛ a, na Rebeka ani gye ho sɛ ɔbɛware Isak anaa?— Ná Rebeka nim sɛ Yehowa na asoma Elieser. Enti, bere a Rebeka abusuafo bisaa no sɛ ɔbɛkɔ Kanaan akɔware Isak anaa no, ɔkae sɛ: ‘Yiw, mɛkɔ.’ Ntɛm ara na ɔne Elieser siim kɔe. Bere a woduu Kanaan no, ɔwaree Isak.
Esiane sɛ Rebeka yɛɛ nea Yehowa pɛ sɛ ɔyɛ nti, Yehowa hyiraa no. Mfe pii akyi no, wɔwoo Yesu wɔ Rebeka abusua mu! Sɛ wusuasua Rebeka na woma Yehowa ani gye a, obehyira wo nso.
Ná Rebeka yɛ ɔbea bɛn?
Dɛn nti na na Abraham mpɛ sɛ Isak ware Kanaanni bea?
Ɛyɛɛ dɛn na Elieser hui sɛ Rebeka yɛ ɔbea a ɔfata sɛ Isak ware no?
Dɛn na yebetumi ayɛ de asuasua Rebeka?